Hoyga - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta-Biyaha 'ISD 834
Ku Laab Dugsiga
Samee xiriiro taas
Waxay qaadataa doox si loo guuleysto
Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Degmada
Deeqda darajada ugu dambaysa waa muusig dhegaha agaasimaha kooxda heesta
Guddigu wuxuu raadiyaa shaqsiyaad buuxiya kursiga guddiga bannaan
Degmadu inay weydiisato cod -bixiyayaasha inay tixgeliyaan codsiga maalgelinta deyrta (ka furmay daaqad/tab cusub)
Waxbadan ka baro qorshaheena jawaab celinta ee COVID-19 si loo abuuro goobo ammaan ah oo caafimaad leh oo loogu talagalay carruurta deyrta
Waxbadan ka aqri jawaabta COVID-19
Cashuur -bixiyeyaasha degmada waxaa laga codsan doonaa inay cusboonaysiiyaan cashuurta hawl -gabka ah ee dhacaysa Noofambar 2, 2021, iyo sidoo kale inay tixgeliyaan maalgelin cusub oo gacan ka geysanaysa joogtaynta waxbarashada tayada leh iyo maalgelinta tiknolojiyadda carruurta iyo fasallada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Levy 2021
Liisaska Bixinta Iskuulka
Raadi liiska agabyada dugsiga ee uu ubaahan yahay ardaygaaga Dugsiga Hoose iyo Dhexe sanad dugsiyeedka cusub.
Akhri Waxbadan oo ku saabsan Liisaska Bixinta Iskuulka
Halkan Meel baa Adiga kuu ah (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Waxaan ka fikiri karnaa qiyaastii 8,400 sababood oo ah inaad dooratid iskuulada Stillwater. Bal u fiirso naftaada waxa inaga duwan?
Halkan ka aqri waxbadan oo ku saabsan Halkaan Meel baa kuu furan (wuxuu ka furmayaa daaqad cusub / tab)
Waxaan ku saabsan nahay wax ka badan kaliya tacliinta. Waan ognahay carruurta dareemaysa jacayl iyo nabadgelyo inay si fiican wax u bartaan. Taasi waa sababta aan diiradda u saarno jabinta caqabadaha si ilmo kasta uu u helo fursad uu ku iftiimiyo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barashada Qalbiga
Khamiis September 23
Fadhiga Xiran Subscribe Dheh Digniinta
Fadhiga Shaqada Subscribe Dheh Digniinta
Shirka Gudiga Dugsiga Subscribe Dheh Digniinta
Jimce September 24
Poni Carnival -ka Soo Socda Subscribe Dheh Digniinaha
4 : 30 PM - 6 : 30 PM
Dugsiga Sare ee stillwater, 5701 Stillwater Blvd N, Oak Park Heights, MN 55082, USA
Talaado September 28
Kooxda Shaqada ee Maaliyadda iyo Hawlgallada Subscribe to Alerts
Arbaco September 29
Kooxda Siyaasadda ee Guddiga Shaqada ayaa iska diiwaangeliya Digniinta
Khamiis September 30
Shirka Maaliyadeed iyo Hawlgallada Subscribe dheh Digniinta
Shirka Dhaqaalaha iyo Hawlgallada - Waxaa dib loo ballamiyay Agoosto 31, 2021 Kusoo Biir Digniinta
Khamiis Oktoobar 7
Isniin Oktoobar 11
Taariikhda Xaddidaadda Shirka Ku Xidhnow Digniinta
Talaado Oktoobar 12
Arbaco Oktoobar 13
Khamiis Oktoobar 14
Talaado Oktoobar 19
Kalfadhiga Shaqada Subscribe Dheh Digniinta
Kulanka Guddiga Dugsiga ayaa dib loo dhigay Oktoobar 19, 2021 Subscribe to Alerts
Khamiis Oktoobar 21
Majiro Iskuul Kaqeybgala Digniinta
Kulankii Shaqada waxaa loo beddelay Oktoobar 19, 2021 Subscribe to Alerts
Eeg Kalandarka oo Buuxda
Caawinta qoysaska markay marayaan dugsiyadeena - laga bilaabo preK iyo wixii ka dambeeya.
Meel carruurtu jecel yihiin inay wax ku bartaan.
Meel ammaan ah oo ardayda ay sahamiyaan fursadaha.
Fursado waaweyn, shaqsiyeed.
Dhaqan dheer oo heer sare ah ee tacliinta, farshaxanka iyo ciyaaraha fudud